NYI LYNN SECK 18+ DEN: 2006
Posted by NLS at 10/20/2006 01:37:00 PM No comments:
Posted by NLS at 10/18/2006 05:05:00 AM No comments:
How's Myanmar Blogs : The best review of Mayvelous
"............. I notice about Myanmar blogs are 90% copy cats. I mean, give meabreak, every single blogs have to use the same old black skin? 99% of them haveashout box in it. And do you have to use the same shout box application/code also? Some new blogs just copy the whole thing including shout box code so you can see the other blogger’s conversation on their blog as well. Also, must every single blog have to publish background music or Odoe or downloads just becos this senior/model blogger is doing so?
Please be genuine, why do you have to continue copying what others do? Where is your originality? Where is your creativity? Where is your imagination? Where is your uniqueness? It’s very depressing to see clone blogs one after another.
My 2cents: Be creative, let your imaginations go wild for once inawhile, show off your artistic side, do change that black background and be colorful for god sake. Instead of yelling 80% nonsense in the shout boxes and utilize comment feature on particular topic/post to give your constructive feedback once inawhile. Let your voice be heard inaproper way, inagreat manner, with legitimate reasoning. And let your comment be resourceful and supportive for each other......."
Read detail here : Mayvelous
ဒါဖတ်ပြီး ချက်ခြင်းပဲ မေဗလပ်စ်ကို ချီးယားလုပ်လိုက်တယ်။ ဒီအထဲမှာ မပါတာ တစ်ချို့ကို ကျွန်တှောက ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ အချို့သော သူတွေဟာ ချတ်ဗောက်စ်တွေမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ရေးတတ်ကြတယ်။ ဒါဟာ အတှောဆိုးရွားတဲ့ ကိစဿစတစ်ခုပါ။ ဘာလို့လဲဆို အဲဒါကို ချက်ခြင်း ဆိုသလို လူအားလုံး မြင်သာစေတာ မို့ပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ မလုပ်သင့်တာကို ခွဲခြား သိသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ရှေ့နောက် မစဉ်းစားဘဲ ကိုယ့်ရည်းစား ဓါတ်ပုံတွေ၊ အတူတူ ရိုက်ထားတာတွေ တင်တဲ့ ကိစဿစပါ။ ချစ်တုန်းခင်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို တင်ထား ပြီးကာမှ ပြတ်သွားခဲ့ရင် တစ်ဖက်လူအတွက် မကောင်းပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက အဲဒီ လူတွေအကြောင်း နာမည်တပ်ပြီး ရေးတာပါ။ အင်တာနက်ဆိုတာ လူတကာ မြင်နိုင်တဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူများကို အဲဒီလို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ချစ်ခဲ့စဉ်ကတော့ တုန်နေအောင် ချစ်ခဲ့ကြပြီး ကိုကိုတွေ ညိုညိုတွေ ခှေါခဲ့ပေမယ့် ပြတ်တော့မှ သေနာမတွေ အဆင့်မရှိတဲ့ကောင်တွေ နာမည်ကြီးတပ်ပြီး၊ ဓါတ်ပုံကြီးတပ်ပြီး ပြောတာကတော့ တှောတှော မလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါပဲဗျာ။ ကျွန်တှော ဖတ်ရင်း တှောတှော စိတ်လေ သွားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက သူတစ်ပါး အကောင့်က ဘန်းဝဒ် ဆွဲတဲ့ ကိစဿစပါ။ ဥပမာ ကျွန်တှော လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာဘလော့ခ်လင့် ဆိုဒ်လိုဂို အသေးလေးတွေကို တချို့တွေ ယူသုံးထားကြတာ တွေ့ရတယ်။ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားကြီး ကောင်းမွန်တာ မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ထားတာလေး သူများတွေ အသင့်သုံးနိုင်တာ တွေ့ရတော့ ကျွန်တှောလည်း ဝမ်းသာတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆိုးတာက သူတို့က အဲဒီပုံတွေကို ကိုယ့်ဖိုတို အကောင့်မှာ ဟိုစ့်မလုပ်ဘဲ ကျွန်တှော့ အကောင့်ကနေ တိုက်ရိုက် ဆွဲသုံးပါတယ်။ ပိုပြီး ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတာက ခွင့်မတောင်းတဲ့အပြင် ခရက်ဒစ်လေးတောင် မပေးပါဘူး။ ပြောချင်တာက ဒီပုံကို ယူသုံးဖို့ ခွင့်တောင်းစရာ မလိုဘူးလို့ ပြောဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ ကျွန်တှော့ အကောင့်ကို ယူသုံးပါလို့ ပြောထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပရိုက်ဗေဆီ သဘောတရားနဲ့ ကှောပီရိုက် သဘောတရားကို နားလည်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုက သူတစ်ပါးရဲ့ စာတွေ ပုံတွေကို ကိုယ့်ဘလော့ခ်မှာ ဖှောပြတဲ့အခါ မူလ ရေးသားသူနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်၊ ဘယ်က ယူထားတယ်ဆိုတဲ့ လင့်ခ်တွေကို ခရက်ဒစ် ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် မဟုတ်တဲ့ အရာအတွက် ဂုဏ်ယူ နေစရာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ဘလောခ့်ဂါတိုင်းလိုလို အနည်းဆုံး ဘလော့ခ် နှစ်ခုသုံးခု ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဟာက main blog ဆိုတာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဘလော့ခ်မှာ ဒါရေးသလို နောက်ဘလော့ခ်မှာလည်း ဒါထပ်တင်တယ်။ ရေးသားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကလည်း ကွဲကွဲပြားပြား မရှိတာမို့ နောက်ပိုင်း ဖတ်ရှုသူက ဘယ်ဘလော့ခ်ကို ဝင်ဖတ်ရမှန်း မသိတော့ပါဘူး။ အမှန်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အဓိက ဘလော့ခ် ထဲကမှ အခြားဘလော့ခ်တွေကို ညွှန်းဆို သင့်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဘလော့ခ်လမ်းညွှန်မှာ အချို့ဘလော့ခ်ဂါများရဲ့ အဓိကလို့ ထင်ရတဲ့ ဘလော့ခ် တစ်ခုကိုသာ ထည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တှော လက်လမ်း မှီသလောက် အပ်ဒိတ် မဖြစ်တဲ့ ဘလော့ခ်တွေဆို ဖျက်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ကျွန်တှော မြင်တဲ့ အချက်တွေပါ။ ဒီပိုစ့်အတွက် မေဗလပ်စ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Cheer again May!!!
Here added other bloggers' opinion relating with this post
Tags: Review, Myanmar, Blogger, Blog, Dos and Donts
Posted by NLS at 10/16/2006 07:26:00 PM2comments:
Posted by NLS at 10/16/2006 11:52:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/16/2006 09:13:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/16/2006 08:42:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/16/2006 04:24:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/16/2006 03:34:00 AM 1 comment:
Posted by NLS at 10/16/2006 02:28:00 AM No comments:
Do not use antivirus software as you wish. See how they really can prevent your pc from various virus attacks and furture user supports. Here some geeks tested in their own lab and compared the actual results. You will see some well-known softwares are just shit.
See more detail here : www.virus.gr
According to this result, I suggest you to use AntiVir Classic. It is totally freeware, easy to use and, can be updated daily virus definitions. Only one annoyance! it will ask you to upgrade Premium version everytime virus definitions updating. So, just forget it and it is really worthy to use, I recommand. I m also using this along with Sygate Firewall. Here you can download [AntiVir].
Technorati Tags: Best Antivirus Softwares, Rank, Review
Posted by NLS at 10/16/2006 01:23:00 AM 1 comment:
All the song effects were made byahuman chorus. Awesome and Creative!
Tags: Honda Chorus, Ads, Youtube, Movie
Posted by NLS at 10/16/2006 12:47:00 AM 1 comment:
Posted by NLS at 10/15/2006 05:57:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/12/2006 04:57:00 PM No comments:
Posted by NLS at 10/12/2006 03:39:00 PM No comments:
ကျန်းမာရေး ဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတာလေးပါ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ။ ကျွန်တှောလည်း ဖြတ်မှ ဖြစ်တော့မယ်။ မသောက်ဘူး မသောက်ဘူးနဲ့ တှောတှော လုံးပါးပါးလာပြီ။
Via : Healthbolt
တကယ်ဆို အဲဒီ စီးကရက်နံ့ကို ခံတောင် မခံနိုင်တော့ဘူး။ အရင်တုန်းကဆို ဆက်တိုက်သောက်နေပြီး လပေါင်းများစွာ မသောက်ဘဲလဲ နေနိုင်တယ်။ အခု ဆို သောက်ချင်စိတ် ဖြစ်တယ်။ သောက်လိုက်မိရင်လည်း တစ်လိပ်ကုန်အောင် မသောက်ချင်တော့ဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်တော့ ကိုယ်ခံအား ကျလာတယ်။ အပူအအေး ပြောင်းလဲဒဏ်ကို သိပ်မခံနိုင်ဘူး။ မောတယ်။ အဲဒါတွေ သိနေလျက်နဲ့ ဆက်သောက်နေမိတာ တှောတှော ကြာနေခဲ့ပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ ပြတ်အောင် ဖြတ်မှ ဖြစ်တော့မယ်။ ဆေးလိပ်ဆိုတာ စွဲတယ်။ မယုံမရှိနဲ့။
Technorati Tags: Smoking, Health, Knowledge
Posted by NLS at 10/12/2006 08:09:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/12/2006 12:15:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/11/2006 05:58:00 PM No comments:
#1 Video Converter 4.1.17+Crack
Supports AVI, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV, Divx, xvid.
All supported formats to VCD, SVCD, DVD (PAL,NTSC)
All supported formats to AVI (DivX,XviD, MPEG-4);
Download From [Depositfiles] [Tryor] [Rapidshare]
Ps: You have to waitafew minutes to get download access.
Technorati Tags: Video Converter, Software, Download, #1 Video Converter 4.1.17, Crack
Posted by NLS at 10/11/2006 03:35:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/11/2006 02:00:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/08/2006 03:37:00 AM No comments:
See more photos here: Album
တစ်နေ့က ကျွန်တှောဟာ အိနဿဒိယရဲ့ နာမည်ကျှော Swaminarayan ကျောင်းတှောကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလောက် လှပ ခန့်ညား လိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားတဲ့ အတွက် အလွန်ပဲ အံ့အားသင့် ခဲ့ရတယ်။ ဒီကျောင်းတှောကို ဟနဿဒူလူမျိုးများ အထွတ်အမြတ် ကိုးကွယ်သူ ဘဂဝမ်ဆွာမိနာရရန် နေရာကို ၅ဆက်မြောက် ဆက်ခံသူ ဆရာတှော ဆွာမိမဟာရာဂ်ျ တည်ထားခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံး ဆွာမိကြီးကို ၁၇၈၁ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အသက် ၁၁နှစ်သားမှာ အားလုံးကို စွန့်ခွာလို့ ဟိမဝနဿတာတောင်တန်းများ တလျောက် နဲ့ အိနဿဒိယကို ပါတ်ပြီး တရားအားထုတ်ခဲ့တယ်။ သျှီဝ ဘုရားရှင် ဝင်စားသူလို့ ယုံကြည်ကြတယ်။
ဒီကျောင်းတှောရာကြီးဟာ အကျယ်ဧက ၁၀၀ ရှိပါတယ်။ အနုပညာ လက်ရာမြောက်တဲ့ ကနုတ်တွေ၊ ပန်းတွေ၊ ရုပ်တု ရုပ်ကြွတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတယ်။ ကျောင်းတိုင်တွေကို သဲကျောက်တွေနဲ့ ထွင်းထုထားပြီး အဓိက အဆောက်အအုံ ဖြစ်တဲ့ ဘုရားရှင်များ ကျောင်းဆောင်ကတော့ စကျင်ကျောက်သားများနဲ့ ထွင်းထုထားပါတယ်။ ကျောင်းဆောင် ခေါင်မိုးတွေကို အီတလီနဲ့ ရောမခေတ်က ဒုမ်း ပုံစံယူပြီး ဆောက်ထားတယ်။ အရမ်းလက်ရာ မြောက်ပါတယ်။ ကျောင်းဆောင် ပတ်ပတ်လည်ကို ဆင်ရုပ်တုပေါင်း များစွာနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတယ်။ ဗုဒဿဓဘုရားရှင်ရဲ့ ဖြစ်တှောစဉ် တစ်ချို့လည်း ပါတယ်။ အများစုကတော့ ဇာတက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပါ။
ဆွာမိကြီးရဲ့ ဘဝတာကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ တကယ့်ကို ရင်သပ် ရှုမောစရာ ဖြစ်လောက် အောင်ကို ကောင်းမွန် လှပါတယ်။ သမဿမတရုံရဲ့ နှစ်ဆလောက်ရှိတဲ့ စကရင်ပှေါမှာ ပြတာပါ။ အဲဒီ ရုပ်ရှင် ပြီးတော့ စက်ရုပ်တွေနဲ့ သရုပ်ဖှော ပြပါတယ်။ စက်တပ်ထားတဲ့ ရုပ်ထုများဟာ အရမ်းကို အသက်ဝင်လှပါတယ်။ အလင်းအမှောင်နဲ့ ဆက်တင် ဖွဲ့စည်း ထားမှုကလည်း တကယ့်ကို ရီရယ်လစ်စတစ် ဖြစ်လွန်းပါတယ်။ နောက်တော့ အိနဿဒိယရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းရုပ်တုတွေကို လှေစီးပြီး လိုက်ကြည့်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားတယ်။ နောက်ဆုံးကတော့ စကဿငာပူရဲ့ ဆန်တိုဆာက နာမည်ကျှော ဝါးတားဖောင်တိန်လို ရေပန်း ပြပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ လေဆာဆလိုက်ရှိုးတွေ မပါတော့ စကဿငာပူကို မမှီပါဘူး။
ဒီကျောင်းတှောရာကို ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ မရပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ စိတ်ညစ်နေတုန်း ဒုတိယ ဂုရုကြီးက ကျွန်တှော့ကို လက်ခံ တွေ့ဆုံမယ်လို့ ပြောလာပါတယ်။ ကျွန်တှောနဲ့ ၁၅ မိနစ်လောက် စကားပြောပြီးတော့ လက်ဆောင်တွေ ပေးပါတယ်။ ကျွန်တှောက အတ်ထ်ကို လေ့လာနေသူလို့ ပြောတော့ သူရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တှောဟာ အဲဒီ ကျောင်းတှောရာကြီးကို သွားရတာ အလွန်ကို စိတ်ကြည်နူးမိတယ်။ လက်ရှိ ဆွာမိကြီးကိုလည်း အထူးပဲ လေးစားမိတယ်။ ဒီလို ကျောင်းတှောကြီးကို သူဘယ်လိုများ တည်ခဲ့သလဲလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။ အနုပညာကို နှစ်သက်မြတ်နိုးသူ ကျွန်တှော့ အတွက်ကတော့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေရာ တစ်ခုပါပဲ။ ဒီခရီးစဉ်ကို သွားဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးတဲ့ အမကိုလည်း ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။ ခရီးအသွားအပြန် ကုန်ကျစရိတ်က ၁ဝဒှေါလာခန့် ဖြစ်ပါတယ်။
Technorati Tags: Bhagwan Swaminarayan, Pramukh Swami Maharaj, Temple, India, Review
Posted by NLS at 10/08/2006 02:44:00 AM No comments:
ငါ့ဘဝမှာ ငါ့ဘာသာ အဆင်ပြေအောင် နေနေတဲ့ အချိန်မှာ အနေကျပ်အောင် လုပ်တဲ့သူ အားလုံးကို မုန်းတယ်။ တမြေ့မြေ့ကို မုန်းတယ်။ သောက်စကား များတဲ့ သူတွေကိုလည်း မုန်းတယ်။ ငါ့ခြေထောက် တွေကိုလည်း မုန်းတယ်။ ငါ့ကိုယ်ငါ အမုန်းဆုံးပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ယောက်တည်း ရောက်ရာပေါက်ရာ လျှောက်သွား ပစ်လိုက် ချင်တော့တယ်။ အမေတို့ ရှိနေသေးလို့။ သူတို့ မရှိတော့တဲ့ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တှော ထွက်သွားမယ်။ အမတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ ညီလင်းဆက်က လိမဿမာတယ်။ ဆိုးချင်နေတာ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆိုးအောင် လုပ်နေတာတဲ့။ အမရယ် ဘယ်သူကတော့ ဆိုးသွမ်း ချင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော သိပ်မွန်းကြပ်တယ်။ မွန်းကြပ်တာတွေ ကိုလည်း ပြောမထွက်ဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပူ သူများကိုလည်း ပူစေတဲ့ လူနာတစ်ယောက် မဖြစ်ချင်ဘူး။ ကျွန်တှောဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နတ်ဆိုး တစ်ကောင်လို ထင်မြင်နေမိတယ်။ အဲဒီအတွက် ဖြေသိမ့်မှု ရလိုရငြား သူများတွေ အကျိုးရှိမယ့် အရာလေးတွေ ကျွန်တှော ကြိုးစားလုပ်တယ်။ မနေ့က စာလေး တစ်ပုဒ် ဖတ်ရတယ်။
ဂဂဿငါမြစ်ဆိပ်မှာ သူတှောစင်တစ်ပါး ရေချိုးနေတယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ မြစ်ထဲမှာ ကင်းမြီးကောက် တစ်ကောင် မျောနေတာကို သူမြင်လိုက်ရတယ်။ သူဟာ ကင်းမြီးကောက်ကို လက်နဲ့ ဖမ်းဆယ်ပြီး ကယ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ကင်းမြီးကောက်ကလည်း သူ့ကို အနဿတရာယ် ပြုမယ်ထင်လို့ လက်ကို ပြန်ကိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ရေထဲကို ပြုတ်ကျသွားပြန်တယ်။ သူတှောစင်ဟာ ထပ်မံပြီး ဆယ်တယ်။ ကင်းမြီးကောက်ကလည်း ထပ်ပြီး ကိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆယ်လိုက် ကိုက်လိုက် ရေထဲ ပြုတ်ကျလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး ကင်းမြီးကောက်ဟာ ကုန်းပှေါကို ရောက်သွားပြီး အသက်ရှင်သန် သွားတော့တယ်။ အဲဒါကို မြင်နေကြရတဲ့ ဘေးနားက ရေချိုးသူတွေက ဘာဖြစ်လို့ အနာခံပြီး ကိုယ့်ကို ကိုက်နေတဲ့ ကင်းမြီးကောက်ကို ကယ်ရသလဲလို့ မေးကြတယ်။ အဲဒီအခါ သူတှောစင်က
ကိုက်တာဟာ ကင်းမြီးကောက် အလုပ်မို့ သူအလုပ် သူလုပ်တာ ဖြစ်ပြီး၊ မိမိကလည်း သူတှောစင်မို့ သတဿတဝါ တစ်ကောင်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ မိမိအလုပ်ကို မိမိလုပ်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။
ကျွန်တှော တွေ့ခဲ့ရတဲ့ လူတွေကတော့ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်မလုပ်ကြဘဲ သူများကို ပတ်သတ်ကြတယ်။ သူများ အကြောင်းဆို အာပေါင် အာရင်းသန်သန် ပြောကြတယ်။ ကိုယ့်အပူကို သူများအပူ လုပ်တတ်တယ်။ သူ့အကြောင်းတရားကို ကိုယ့်အကြောင်းတရား ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်ကြတယ်။ ကြင်နာသနား တတ်သူကို ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းအောင် လုပ်တတ်ကြတယ်။ နေရထိုင်ရတာ သိပ်မွန်းကြပ်တယ်။ အခုလောလောဆယ် စိတ်ထဲရောက်နေတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်က တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့ ပန်းနွယ်ကစိမ်းနဲ့ ဦးသုခရဲ့ ဘဝသံသရာ။ အောက်တိုဘာ ရောက်လာပြန်ပြီ။ ဒီရာသီကို ကျွန်တှော တှောတှော ကြောက်တယ်ဗျာ။
Tags: Nyi Lynn Seck, Diary, Ton Tay Thein Tan, U Thu Kha, Mp3, Download
Posted by NLS at 10/07/2006 11:19:00 PM No comments:
Attention : Only for HighSpeed Connection
Size: 10000x10000, 18Mb
Technorati Tags: Lovepixel, Amazing, Pixel Art
Posted by NLS at 10/07/2006 11:14:00 PM No comments:
Posted by NLS at 10/07/2006 10:10:00 PM No comments:
Posted by NLS at 10/07/2006 09:20:00 PM No comments:
Posted by NLS at 10/06/2006 05:38:00 AM No comments:
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတစ်ခု ဝေမျှ ချင်ပါသေးတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ စိတ်ညစ်စရာတွေ၊ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်မှုတွေနဲ့ ကျွန်တှောတို့ စိတ်တွေက အနားမရကြဘူး။ သီချင်းတွေ ဖွင့်လိုက်တော့လည်း လူလုပ်ထားတဲ့ အသံတုတွေကိုပဲ ကြားနေကြရတယ်။ တကယ်ဆို ကျွန်တှောတို့က သဘာဝ အသံတွေကို နားထောင်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း စိတ်ကို အနားပေး သင့်တာပါ။ ကျေးငှက်မြည်သံ၊ စမ်းရေစီးဆင်းသံ၊ ရေလှိုင်းခတ်သံ၊ လေတိုက်သံ၊ ဆိတ်ငြိမ်သံ စတဲ့ သဘာဝ အသံတွေက အရမ်း ကြည်နူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အချိန်မရလို့ ဒီအသံတွေကို သဘာဝအတိုင်း မခံစားနိုင်ဘူး ဆိုရင် ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ကွန်ပြူတာထဲမှာသာ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ကျွန်တှောကတော့ အခုဆို ညအိပ်ရင် အဲဒါလေး ဖွင့်ပြီး အိပ်ဖြစ်တယ်။ အရမ်းကို ရီလက်စ် ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကို အိပ်ပျှောသွားတယ်။ ကိုယ်နဲ့ သင့်တှောတဲ့ အသံတွေကို ချိန်ညှိလို့လည်း ရတယ်။ ဒါလေးကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးလို့ နားထောင်ပြီးရင် အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာ ကျွန်တှော့လိုပဲ ခံစား မိပါလိမ့်မယ်။ ဒီဘလော့ခ်ကို ရောက်မလာတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း ဒါလေး လက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါ။ စိတ်လက် ပေါ့ပါး အေးချမ်းတဲ့ ဘဝဆိုတာပဲ ပျှောစရာ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။
Download : Natural Sound Therapy 2.0 [15Mb]
Technorati Tags: Natural Sound Therapy, Download
Posted by NLS at 10/06/2006 01:59:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/05/2006 11:46:00 PM No comments:
ဂူဂယ်လ်အတ်က မြေပုံတွေကို အသစ်ထပ်မံ ထည့်သွင်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ အခုဆို မြို့ကြီး တှောတှောများများ ပါလာပါပြီ။ မနဿတလေး မြို့ကိုလည်း မြင်ရပါပြီ။ ကျွန်တှော့ရဲ့ မြစ်ကြီးနားနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တွေလည်း ပါလာပါပြီ။ နေရာဟောင်းလေးတွေ ပြန်ကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လူငယ် ဘဝကို သတိရလိုက်တာဗျာ။ ဂူဂယ်လ်အတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ် မသွင်းထားသူတွေ ဒီနေရာကနေ ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။ [Flash Earth]
Technorati Tags: Imagery Update, Google Earth, Myanmar, Map
Posted by NLS at 10/04/2006 11:03:00 PM No comments:
Posted by NLS at 10/04/2006 02:56:00 PM No comments:
Posted by NLS at 10/04/2006 12:40:00 AM No comments:
Posted by NLS at 10/04/2006 12:28:00 AM No comments:
World Ebook Fair is inviting again for free downloading. 1.5 million ebooks are availabel there. It' ll be free of charges till to end of this month. So grab them as soon as possible. I've downloaded every interesting ebooks. Here is some of my lists.
Rudyard Kipling - 2nd Jungle Book
Dotoyevsky - The Idiot
Grimm Brothers - Grimm Fables
Tolstoy - War and Peace (I've never finished that one, so boring)
Louis Carol - Through the looking glass
John Milton - Paradise Lost, Paradise Regained
At least, you can keep for ref. But take care copyright law. [Link]
Technorati Tags: Ebooks, Collection, Download
Posted by NLS at 10/02/2006 11:04:00 PM No comments:
Posted by NLS at 10/02/2006 09:53:00 PM No comments:
Posted by NLS at 10/01/2006 11:48:00 PM No comments:
Posted by NLS at 9/30/2006 02:51:00 PM No comments:
Posted by NLS at 9/30/2006 12:41:00 PM No comments:
ကျွန်တှော့ကို အီးဘွခ် တောင်းတဲ့ သူတွေရော၊ သီချင်းခွေ တောင်းတဲ့ သူတွေရော၊ ဓါတ်ပုံ အပ်တဲ့ သူတွေရော၊ ဒီဇိုင်း လုပ်ခိုင်း သူများရော တကယ်ကို ဆောရီးပါဗျာ။ ဘယ်လိုမှ နေရထိုင်ရတာ မုဒ်မလာလို့ပါ။ စိတ်တွေ နောက်လို့ အီးမေးလ်တွေလည်း တစ်ရက်နေမှ တစ်ခါလောက်ပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မပြန်ဖြစ်ရင်လည်း ဆောရီးပဲဗျာ။ မြန်မာ အီးဘွခ်တွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကနေသာ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ယူ ကြပါတော့လို့။ အပျင်းတကာ့ အပျင်းဆုံး အလုပ်ထဲမှာ အဲဒီ အပ်လုဒ်ဒင်း ပါနေလို့ပါ။ ဒီက ကွန်နက်ရှင် မကောင်းတာ ကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ ဒီဘလော့ခ်ကို ရောက်လာတဲ့သူတွေ အရမ်းတိုးလာတယ်။ photoshopit ဆိုဒ်က ကျွန်တှော့ရဲ့ ဖိုတိုရှောပ့် ကျူတိုရီရယ်လ် နှစ်ခုကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ အရင်ကဆို အဲဒီလို လူတွေ များလာရင် ပျှောမိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဘာမှ သိပ်မခံစားရ တော့ဘူး။ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးလာတယ်။ အရင်ကလို စိတ်ရှိလက်ရှိ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်တွေ ရေးချင်ပေမယ့် ရေးလို့ မရတော့ဘူး။ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း စကား မပြောချင်ဘူး။ အေးအေး ချမ်းချမ်းလေး နေချင်တယ်။ ဘဝမှာ တိုးတက် အောင်မြင်စရာတွေ ကြုံမယ် ကြံတိုင်း ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တှော့ အကုသိုလ်ကလည်း တှောတှောကြီးတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်လို တော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ မြန်မာဘလော့ခ် လုပ်ချင်သူများလည်း ဒီဘလော့ခ်ရဲ့ ညာဘက် အပှေါဆုံးမှာ ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ လင့်ခ်လေးတွေ ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ တစ်ယောက်ချင်းစီကို မကူညီနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ အဲဒီမှာ အသုံးဝင်မယ့် ပိုစ့်တွေ စုပေးထားပါတယ်။
လောလောဆယ် စိတ်ပျက်လက်ပျက် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်များ
မှန်အိမ်လေး သီချင်းကို တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး ဖွင့်နားထောင်တယ်။ [Lamp]
Amitav Ghosh ရဲ့ The Glass Palace ဆိုတဲ့ မနဿတလေးအကြောင်း စာအုပ် ဖတ်နေတယ်။
တစ်နေ့ကို ကှောဖီ ငါးခွက်လောက် သောက်ဖြစ်တယ်။
ညဆို အစောကြီး အိပ်တယ်။
သိပ်ပီပြင်လွန်းတဲ့ အိပ်မက်တွေ ခဏခဏ မက်တယ်။
ဆေးလိပ်ကို သေအောင်ပြန်သောက် ဖြစ်နေတယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်တယ်။
ကံမကောင်းတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗေဒင် ပြန်တွက်ကြည့်တော့ အဖြေတွေက ရယ်စရာ ကောင်းလောက်အောင် သိပ်ကောင်းနေလို့ ထိုင်ရယ်နေမိတယ်။
အာရှနဲ့ ဥရောပ အနုပညာများဆိုတဲ့ စာအုပ်အတွက် အချက်အလက် ရှာနေတယ်။
ဗိုက်အောင့်လို့ ဆေးလှိမ့်သောက်နေရတယ်။ (ရောဂါတွေထဲမှာ အဲဒါကို သောက်ရမ်း မုန်းတယ်)
ဝဘ်ဆိုဒ်အတွက် ဒီဇိုင်း ဆွဲနေတယ်။ [sample]
သီချင်းတစ်ပုဒ် ရီမစ် လုပ်နေတယ်။
တှောပြီဗျာ။ စိတ်နဲ့လူနဲ့ သိပ်မကပ်ဘူး။ ဘာမှလည်း ခံစားလို့ မရဘူး။ အကြံဉာဏ်တွေလည်း မထွက်ဘူး။ ပိုက်ဆံလည်း မဝင်ဘူး။ အလုပ်ပေးမယ့် သူလည်း မရှိဘူး။ ဘာမှလည်း မတတ်ဘူး။ တွေးမိရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ရင်လေးလာပြီ။
Posted by NLS at 9/29/2006 07:34:00 PM No comments:
Posted by NLS at 9/29/2006 06:14:00 PM No comments:
Posted by NLS at 9/28/2006 11:35:00 AM 1 comment:
Are you Monopoly crazy like me? Here is really cool monopoly game. Download it and extract somewhere in your pc. If you get alerts after extracting zip file, neglect them and can start easily and directly from there.
Download: Monopoly Here and Now [10.5Mb]
Technorati Tags: Monopoly, Game, Download, Monopoly Here and Now
Posted by NLS at 9/27/2006 06:45:00 PM No comments:
ရေကူးသင်နေတာမှ မဟုတ်ဘဲ အချစ်ရေ
သစ်ရွက်ပှေါ မိုးရေစက်ကလေးတစ်စက် ကျလာတဲ့ပုံ၊
ဟောဒါ... မုတ်သုန်ရာသီပဲဆိုတာ ယုံတယ်။
အချစ်ရဲ့ ဂုဏ်တှော ကျေးဇူးတှော အဆောင်အယောင်ကို
ငါ့ရဲ့ ... အမိုက်အမဲမလေးရေ
ကိုယ် ဆိုတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ငနဲက
ငါက ရှုံးပြီးသား မဟုတ်လား
မင်းပေးမယ့် အရှုံးအဖြတ်ပဲ လိုတယ်။
ငါ့ကို အဆုံးသတ် ပေးပါတော့ကွယ်...။
ရေကူးနည်းပြတွေကို ဆဲ နဲ့
ဘဝမှာ ခွေးကူး ကူးရဲဖို့ပဲ လိုတော့တယ်။
ဩဂုတ် ၃. ၂၀၀၁
Read more MKSS' poems here : MKSS Collection
Technorati Tags: Min Khaik Soe San, Poem, Myanmar, MKSS
Posted by NLS at 9/26/2006 06:45:00 PM No comments:
Posted by NLS at 9/25/2006 05:40:00 PM No comments:
ပျှောရွှင်စွာ ပွင့်ရဲသော ရက်စွဲတစ်ခု အတွက်ပေါ့
24 Sept, 2006
Dedicated to M2's by-force weekly Poetry roll! ha ha :P
Posted by NLS at 9/24/2006 11:05:00 PM No comments:
Posted by NLS at 9/24/2006 11:30:00 AM No comments:
Posted by NLS at 9/24/2006 10:43:00 AM No comments:
Posted by NLS at 9/22/2006 02:43:00 AM No comments:
ဂူဂယ်လ်က ပီကာဆာ ဝဘ်အလ်ဘမ်ကို အခမဲ့ ပေးသုံးလိုက်ပါပြီ။ အရင်ကလို အင်ဗိုက်တေးရှင်း စောင့်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဂူဂယ်လ် အကောင့် ရှိသူတိုင်း ရယူနိုင်ပါပြီ။ ဒီဝဘ် အယ်လ်ဘမ်မှာ ပရိုက်ဗိတ်နဲ့ ပဘ်ဗလစ် ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ကိုယ်သူများကို မပြချင်တဲ့ ပုံဆိုရင် သိမ်းထားလို့ ရတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အယ်လ်ဘမ် တွေကိုလည်း ချိတ်ဆက်ထားလို့ရပြီး သူတို့ အပ်ဒိတ် လုပ်တိုင်း ကိုယ့်ဆီမှာ ပှေါလာပါတယ်။ ၂၅၀ မက်ဂါဘိုက်အထိ အခမဲ့ ပေးသုံးထားပါတယ်။ ဒီဝဘ်အယ်ဘမ်ကို ပီကာဆာ ဖိုတိုဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ တွဲဖက်ပြီးတော့လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့် အကောင့်နဲ့ အယ်လ်ဘမ် ရယူပြီးရင် ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ဝေငှပါဦးလို့ ဖိတ်ခှေါပါတယ်။ ကျွန်တှော့ အယ်လ်ဘမ်ကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။ စကားမစပ် မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ဘာလို့များ အလကားရတဲ့ ဂူဂယ်လ်ကို တားဆီးထား သလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့တောင် မရပါဘူးဗျာ။ အလကား ရတဲ့ဟာတွေကိုတောင် အလကား မသုံးရတဲ့ ကျွန်တှောတို့ လူမျိုးတွေအစား ရင်နာမိတယ်။
Technorati Tags: Google, Picasa Web Album
Posted by NLS at 9/22/2006 02:22:00 AM No comments:
ပျင်းပျင်း ရှိတာနဲ့ အီးဘွခ်တွေ လိုက်ရှာရင်းက ပထမဆုံး အိလျဒ်ကို ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆက်ရှာတော့ ဟိုမားရဲ့ ဩဒေးဆယျုကို ထပ်ရပါတယ်။ ဩဒေးဆယျုကို လက်တင်ဘာသာနဲ့ ယူလစ်ဆီးလို့ ခှေါပါတယ်။ (မှောဒန်စာပေမှာ နာမည် ကြီးလွန်းတဲ့ ဂျိမ်းဂျိုက်စ်ရဲ့ စာအုပ်ကိုလည်း အမှတ်ရ ကြမှာပါ) အိလျဒ်က ထရိုဂျန် စစ်ပွဲအကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ အီပစ် ကဗျာကြီး ဖြစ်ပြီးတော့ ဒါကတော့ ထရိုင်မြို့ကြီး ပျက်ဆီးအပြီး သူရဲကောင်း ဩဒေးဆယျုရဲ့ အပြန်လမ်း ရေကြောင်းခရီးမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ထူးခြားဆန်းပြား ဖြစ်ရပ်များကို ရေးဖွဲ့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဩဒေးဆယျုဟာ နာမည်ကျှော ထရိုဂျန် မြင်းရုပ်ထဲမှာ ဝင်နေခဲ့သူ များထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အပြန်လမ်း ၁ဝနှစ်ကျှော ခရီးမှာ သူဟာ ဂရိ နတ်ဘုရားများ၊ မိစဿဆာများ၊ နတ်မိမယ်လေးများနဲ့ တွေ့ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ရပ်ဆန်းပေါင်း များစွာ ကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒီစာအုပ်များဟာ တကယ် ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ဆမ်မြူရယ်လ် ဘတ်တလာ ဘာသာပြန် ထားတာကိုပဲ ရွေးသိမ်းထားတယ်။ ဂရိ ဒဏဿဍာရီတွေဟာ အရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အနောက်တိုင်း စာပေမှာ ဒီနေ့အထိ အလေးထား သင်ကြားလေ့လာ နေကြတာပါ။ စိတ်ဝင်စားရင် နေ့တစ်မြန်မာ ဖိုရမ်မှာ လာရောက် ပါဝင် ဆွေးနွေး ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။ အောက်က ဖိုင်မှာ စာအုပ် နှစ်အုပ်စလုံး ပေါင်းထားပါတယ်။
Download : Iliad and Odyssey [2Ebooks][pdf][2Mb]
Password : http://nyilynnseck.blogspot.com
Technorati Tags: Homer, Iliad, Odessy, Ebook, Download, Greek, Mythology
Posted by NLS at 9/21/2006 08:18:00 PM No comments: